N'aka ekpe megide aka nri Brained Marketers | Martech Zone
Ihe omuma a site na Marketo bụru oke akọ ọdo.
Ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ndị ọkà mmụta banyere ọdịdị mmadụ kwenyere ogologo oge na ọdịiche dị n'etiti aka nri na n'akụkụ aka ekpe nke ụbụrụ. Akụkụ aka nri nke ụbụrụ gị bụ maka okike, ebe akụkụ aka ekpe na-ejikwa nkọwa na mmejuputa. Akụkụ aka ekpe bụ nyocha mgbe akụkụ aka nri bụ nka. Dịka onye na-azụ ahịa, ụdị onye na-eche echiche ị na-eduzi mkpọsa ị na-emepụta. Ya mere, ụdị ahịa ị bụ?
Ga-amasị m na-eche banyere onwe m dị ka dịtụ ziri ezi… mgbe m na-enweghị ọtụtụ nke okike talent, M toro n'ezie n'anya mmetụta na creativity nwere na ahịa. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ike gwụrụ ndị mmadụ, yabụ iche echiche na mpụga ọnụọgụ nwere ike ịbara ndị ahịa gị ma ọ bụ akara gị uru!
Tags: nyochaokikendị ahịa ụbụrụ hapụrụndị ahịandị na-ere ahịa ụbụrụ ziri eziụdị ndị na-ere ahịa
Jenụwarị 5, 2012 na 2:10 PM
Nke a bụ n'ezie ọmarịcha ọkwa, Douglas. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịmara mmetụta dị ịtụnanya okike nwere karịrị ahịa yana otu usoro mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta sirila mee ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Otu ihe m mụtara tupu m bụrụ onye kacha mma ede akwụkwọ na ogologo oge tupu Inc Magazine tozuru oke ụlọ ọrụ m dịka otu n'ime ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa na-etinye ihe okike n'ime mkpọsa ahịa na -emepụta ihe mkpuchi ma na-agbakwunye ndị ahịa uru.
Jenụwarị 5, 2012 na 5:34 PM
Daniel - ị zuru oke. Ahụla m ụlọ ọrụ mara mma nke ọma na ụlọ ọrụ ndị ama ama wuru gafere asọmpi ahụ! Daalụ nke ukwuu maka ịkwụsị saịtị ahụ - anyị ga-enwerịrị ịnwe ihe ngosi redio anyị n'oge na-adịghị anya!
Jenụwarị 5, 2012 na 4:11 PM
Daalụ maka ikenye! Mụ onwe m na-adaba na ngalaba nke Right-Brain marketer. Ọ dị mma ịhụ àgwà ndị m nwere ike ịhapụ na!
Ezi afọ ọhụrụ maka gị!
Ihe omuma ihe omuma a nyeputara m ihe ndi m na-atu anya. Eji m aka ekpe dee ma rie, were aka nri mee ihe ndi ozo. Ka ọ dị ugbu a, ihe infographic ahụ kwuru n'akụkụ “ụbụrụ” nke ihe nkiri ahụ dabara adaba m n’ụdị okike “ziri ezi. N'agbanyeghị nke ahụ, ụdị azụmaahịa ọ bụla dị n'okpuru ya na-ese m dị ka "onye aka ekpe". Aga m atụgharị uche na nke a nwa oge.
Andrew, echere m ezigbo ihe ahụ mgbe mbụ m gụrụ banyere ya. Echere m na ikekwe ha abụọ gafere!
Jenụwarị 10, 2012 na 1:33 PM
Na m ọkachamara ndụ m a Systems Analyst na
Programmer, for fun I am a good artist- otu nke ọkacha mmasị m akwụkwọ na-eru na
Aka nri nke Brain. M na-amụzi ahịa; isiokwu a nwere
nyere m echiche ọhụrụ banyere mkpa ọ dị iji nweta echiche ziri ezi
Jenụwarị 10, 2012 na 8:06 PM
@ twitter-259954435: disqus Achọpụtala m na ọtụtụ n'ime ndị nwere ọgụgụ isi kachasị mma mụ na ha rụkọtara ọrụ nwere ụlọ ọrụ nwere ihe okike na-abụghị nke ọrụ ha… nka, egwu, wdg. iji nnukwu ọrụ na-eji akụkụ abụọ!
Jenụwarị 11, 2012 na 10:02 PM
Daalụ maka ịkekọrịta nke a, Douglas. Ọ jikọtara m na ntụpọ.
Echiche m: ụbụrụ aka ekpe karịrị ụbụrụ ụbụrụ ziri ezi na ịre ahịa bụ otu n'ime ụzọ iji gbanye ụfọdụ ọnụ ọgụgụ aka ekpe na ngwakọta. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụrụ na anyị atụkwasị obi n'ihe anyị nwere ike ịlele, ihe dị adị, na nke na-abawanye uru ndị nwe ụlọ. You mara ma ọnụọgụ ọnụ ọgụgụ dị otú ahụ ọ dị? Ọzọkwa, gịnị banyere njikọta n'etiti omume na omume ma ọ bụ omume?